12 kulan oo si buuxda loogu raaxeysto usbuuca | Androidsis
Ugu dambayn waa jimce! Waana hubaa inaad dhammaantiin qaban doontaan dhammaadka usbuuca ee maanta bilaabmaya iyadoo leh xamaasad ka badan ama ka badan server. Hadaad fasax kujirtid, hambalyo! Haddayna sidaas ahayn, ha ka welwelin, ka hor waxaad haysataa dhowr maalmood oo aad ku iloobi karto hawl maalmeedkaaga, mas'uuliyadaha, oo u hur naftaada waxa aad runtii jeceshahay. Iyo haddii aadan ka fikiri karin wax, sidoo kale ha ka walwalin maxaa yeelay laga soo bilaabo Androidsis waxaan ku siineynaa xoogaa fikrado ah.
Waxaad haysaa taleefanka gacanta ee casriga ah ama kiniiniga ah ee 'Android', waxaad haysataa waqti badan oo firaaqo ah, waxaadna jeceshahay inaad ciyaarto oo aad soo ogaato ciyaaro cusub. Hagaag, boostadan gaarka ah ayaa adiga loogu talagalay adiga oo aan ku soo bandhigi doono dhowr ciyaaro si aad si buuxda ugu raaxaysato dhammaadka usbuuca. Riwaayadaha, xujooyinka, badbaadada, qarsoodiga, dagaallada bilaa rubuc ... Dhexdooda waxaad ka heli doontaa xoogaa wax kasta, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa in midkood uu kugu habboonaan doono. Ma bilaabi karnaa?
1 Amanita Design: Machinarium, Samorost 3 iyo Botanicula
3 Tani War of Mine
4 Ciyaaraha RockStar
Amanita Design: Machinarium, Samorost 3 iyo Botanicula
Isu diyaar garow maxaa yeelay waxaan ku bilaabanay si weyn, kumana bilaabanin hal ciyaar, laakiin waxaan ku sameynay taxane taxane ah oo dhameystiran oo ay soo saareen kuwa masuulka ka ah Naqshadda Amanita. Horumariyahaani wuxuu na siiyaa qaar ka mid ah ciyaaraha ugu wanaagsan ee tacaburka in aad ka heli doontid Play Store-ka loogu talagalay Android, oo ay ku jiraan cinwaannada caanka ah sida "Machinarium", "Samorost 3" ama "Botanicula".
Machinarium waa ciyaar caan ku ah xujo ku dhisan oo aad u ciyaari doontid sidii aad ahayd robot oo kale oo ujeeddada cad ee xallinta xujooyinka badan ee lagama maarmaanka u ah badbaadinta qofka aad jeceshahay. Samorost 3 sidoo kale waa xujo iyo xujo ciyaar ku saabsan gnome iyo biibiile sixirkiisa. Botanicula waxay ku saabsan tahay koox cayayaan ah oo isku dayaya inay ka badbaadiyaan abuurkooda geedkooda cadowga.
Dhammaan cinwaannadan waxay leeyihiin makaanik isku mid ah, oo heerar kala duwan oo dhib leh leh, dhammaantoodna waa hal mar oo lacag bixin ah (€ 4,99) sidaa darteed wax kadis ah kama heli doontid barnaamijka.
Developer: Naqshadda Amanita
"To The Moon" waa ciyaar dhawaanahanba ka socday Play Store. Waxay ku saabsan tahay a ciyaar biimayn oo ay jilayaan laba saynisyahan oo u heellan sidii ay u fulin lahaayeen hamiga ugu dambeeya ee dadka iyaga oo xusuus gelinaya maskaxdooda waxyar ka hor intaysan dhiman. Sheekadan, howlgalka ayaa noqon doona ka caawi mid ka mid ah dadkaas, Johnny, si uu u buuxiyo hamigiisa ah inuu u safro Dayaxa, markaa magaca ciyaarta. Si tan loo sameeyo, waa inaad sidoo kale qaadataa safar aad ku dhex marayso xusuustooda iyo xallinta xujooyinka xariifka ah. Maaha wax ku saabsan ciyaar ficil ah, laakiin waa fekerka, kuna dhex jira qaab sheeko asal ah oo ka duwan.
Waxay sidoo kale leedahay hal qiimo oo ah 5,49 XNUMX iyada oo aan la iibsan isku dhafan ama layaab.
Si Moon ah
Developer: Shabakada XD
Tani War of Mine
Waxaan horeyba idiinka soo sheegnay munaasabad ama wax kale oo ku saabsan "Dagaalkan Miino", a ciyaar badbaado xiiso leh taas oo ay tahay inaad ku gaarto go'aano adag si aad u damaanad qaado badbaadadaada iyo tan badbaadayaasha kale ee ku xayiran magaalo ay go'doomiyeen cadowgu. Waa ciyaar runtii xiise leh, oo aan si sax ah u aheyn maadda; waa inaad dhammeystirtaa howlaha, aad heshaa sahay iyo waxyaabo kale oo badan. IYO markaad dhameyso, waad bilaabi kartaa waxaadna arki kartaa sida sheekadu ahaan laheyd hadii aad go aano kale qaadan laheyd. Ma ahan ciyaar raqiis ah, laakiin waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican qiimeynta 4,5 ka mid ah 5 ee Play Store.
Developer: 11 studios yar yar
Waxaanan ku dhammeyn doonnaa sidii aan ku bilownay, iyadoo la isu geeyay dhammaan kulammada, xaaladdan, oo ay soo saareen RockStar Games, koox heysata wax wanaagsan ururinta ciyaarta biimayn, dhammaantood waxay ku hoos jiraan hal aragti oo ah inay awoodaan inay sahamiyaan adduun furan, sheeko xariijin leh oo aad kari karto, oo ay tahay inaad raacdo, iyo hawlo faro ku tiris ah oo wanaagsan iyo ujeeddooyinka labaad si loo dhammaystiro.
"Xatooyo Grand: San Andreas", "Xatooyo Grand: Auto City", "Max Payne Mobile" ama "Bully" waa cinwaanada ugu fiican ee ururinta 7 kulan, dhammaantoodna waxaa ku kacaya 2,99 4,99, € 6,99 ama € XNUMX iyo iyada oo aan wax lagu iibsado gudaha-app.
Waxaad ka eegi kartaa aruurinta oo dhameystiran Halkan.
Hadana hadaadan dhergin dersin kulan, waxaa laga yaabaa inaad ubaahantahay inaad dhamaadka usbuuca ciyaartid Xaaladda Sheekada Minecraft: Xilliga 2 , sii deynta ugu xiisaha badan ee xilli ciyaareedka ee hadda ku degtay Play Store for Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 12 kulan si buuxda loogu raaxeysto usbuuca
José Carrasquel. dijo
Waa salaaman tahay waxaan maanta ku bilaabayaa cusbooneysiintan oo si fiican ayaan u istaagaa
Jawaab José Carrasquel.